ကျော်ခ – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Wed, 25 Apr 2018 15:09:53 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.5 အစိုးရနှင့် KNPP တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တရားဝင် ဆွေးနွေးမည် https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2018/04/25/157012.html Wed, 25 Apr 2018 08:00:34 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=157012
ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) တို့အကြား တရားဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကို ကယားပြည်နယ်၏ မြို့တော်လွိုင်ကော်တွင် ၂ ရက်အကြာ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
The post အစိုးရနှင့် KNPP တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တရားဝင် ဆွေးနွေးမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ရနောင်းလူသတ်မှုဖြင့် ထိုင်းတရားရုံးက မြန်မာ ၄ ဦးကို ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ် https://burma.irrawaddy.com/news/2018/04/20/156575.html Fri, 20 Apr 2018 01:30:00 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=156575
ရနောင်းမြို့က အထက်တန်း ကျောင်းသူတဦး အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးက မြန်မာ လူငယ် ၄ ဦး ကို ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် အသီးသီး ချမှတ်လိုက်ကြောင်း
The post ရနောင်းလူသတ်မှုဖြင့် ထိုင်းတရားရုံးက မြန်မာ ၄ ဦးကို ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> အင်းဒင် ပြဿနာအား ဂျီနီဗာ ကွန်းဗန်းရှင်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ဟု တပ်ချုပ်ပြော https://burma.irrawaddy.com/news/2018/04/19/156561.html Thu, 19 Apr 2018 09:26:26 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=156561
အင်းဒင်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာအား တပ်မတော်အနေဖြင့် ဂျီနီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။
The post အင်းဒင် ပြဿနာအား ဂျီနီဗာ ကွန်းဗန်းရှင်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ဟု တပ်ချုပ်ပြော appeared first on ဧရာဝတီ.
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မောင်တောမြို့နယ် အင်းဒင်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာအား တပ်မတော်အနေဖြင့် ဂျီနီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ပြောဆို ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ပြင်ဦးလွင်တပ်နယ်၊ တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုကျောင်း၌ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ဥပဒေ (အရာရှိ) ဒီပလိုမာသင်တန်းမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများအား ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက တွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယင်းသို့ ပြောဆိုသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က “အင်းဒင် ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြဿနာများအား ဂျီနီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်းနှင့်အညီ တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တဦးချင်းလိုက်နာမှု အားနည်းသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များအား ဥပဒေနှင့် အညီအရေးယူဆောင်ရွက် ခဲ့ရသည်များလည်းရှိကြောင်း” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် အင်းဒင် ကျေးရွာအုပ်စုု ပဲရုံ(နတလ) ကျေးရွာ သုဿန်အနီး ဘင်္ဂါလီ ၁၀ ဦးကို သတ်ဖြတ်မှု၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် တပ်မတော်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည် ၇ ဦးတို့အား အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ရုံးက ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထိုသတ်ဖြတ်မှုမှာ ၂၀၁၇ နှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂါလီ အကြမ်း ဖက်သမား ၁၀ ဦး အပေါ် ဥပဒေနှင့် အညီ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် တရားစွဲခြင်း မပြုပဲ၊ အင်းဒင်ကျေး ရွာနေ တိုင်းရင်းသား တချို့နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များမှ စိတ်ခံစား နာကြည်းချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သတ် ဖြတ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ထိုဖြစ်ရပ်အပေါ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အေးဝင်း ဦးဆောင်၍ စစ်ဆေးရာ ဥပဒေမဲ့ ကျူးလွန်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့အတွက် ဖြစ်ရပ်ကို ကျူးလွန်သူ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အရပ်သားများအား သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်း၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အရေးယူနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်မှ အရာရှိ စစ်သည် ၇ ဦး အနက် အရာရှိ ၄ ဦးကို ရှုတ်ချ၍ အမြဲတမ်း ထုတ်ပစ်ရန်နှင့် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် နယ်ဘက် အကျဉ်းထောင်တွင် ကျခံစေရန်၊ အခြား အဆင့် စစ်သည် ၃ ဦးကို တပ်သားအဆင့် လျော့ချ၍ အမြဲတမ်း ထုတ်ပစ်ရန် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ အား နယ် ဘက် အကျဉ်းထောင် ကျခံစေရန် ပြစ်ဒဏ် အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၄ရက်နေ့က ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် ARSA မှ နယ်ခြားဒေသရှိ အစိုးရက ကင်းစခန်း များကို စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၊ လူစုလူဝေးဖြင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများဖြစ် သည့် မြို၊ ရခိုင်နှင့် ဒေသတွင်း နေထိုင်သည့် ဟိန္ဒူမိသားစုကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ရာမှာ နယ်မြေခံ ရွာသားများနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ထိုသို့ သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ကနဦး ဒေသတွင်းသတင်းတချို့က ဆိုသည်။
ယမန်နေ့က ပြောကြားခဲ့သော တပ်ချုပ်၏ အမှာစကားထဲတွင် တပ်မတော်အတွင်း စစ်စည်းကမ်းကိုမလိုက်နာဘဲ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများ ရှိလျှင် တပ်တွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်နိုင်သဖြင့် ထိရောက်သည့် ကြိုတင် ဟန့်တားမှုများအား စီမံဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၊ နယ်စပ်ဒေသ ဆက်ဆံရေးများ၊ ပိုင်နက်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ရေကြောင်း၊ လေကြောင်း ဥပဒေများ၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်များကိုလည်း သိရှိနားလည်ရန် လိုကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
ထို့အတူ တပ်မတော်၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ တပ်မတော်၏ ပုံရိပ်၊ နိုင်ငံတော်၏ပုံရိပ်အား ထိခိုက်စေနိုင်သည့် စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်လည်း တပ်မှူးများသည် မိမိတို့ အုပ်ချုပ်ရသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များအား ထိန်းသိမ်း ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ လုံခြုံရေးအရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်နှင့် စည်းကမ်းများကိုလည်း ဦးစီး ဦးဆောင် ပြု၍လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများက ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် လုံခြုံရေးကင်း စခန်းများအားလူအင်အားများစွာဖြင့် လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ လက်နက်များလုယူခြင်း၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် များအား ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းများအား ဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တပ်မတော်က ဥပဒေ နှင့်အညီ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသလို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်လည်း ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ထပ်မံလုပ်ဆောင်လာသဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ နယ်မြေရှင်းလင်းခဲ့နိုင်သဖြင့် ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများ ရည်ရွယ်ချက် မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း တပ်ချုပ်က ပြောသည်။
အကြမ်းဖက်သမားများ အနေဖြင့် လူအင်အားများစွာဖြင့် ဥပဒေမဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများအားလုံး တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် သွားကြခြင်း သာ ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရပြစ်ဒဏ် ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ကာ ပြန်မလာရဲခြင်းကို ၎င်းတို့အပေါ် တပ်မတော်သားများ က နှိပ်စက် အနိုင်ကျင့်မှုများကြောင့်ဟု နိုင်ငံတကာသိအောင် မဟုတ်မမှန်ပြောကြားခြင်းဖြင့် မိမိတို့အပေါ် အထင်အမြင်လွဲအောင် စွပ်စွဲပြောကြားလျက်ရှိကြောင်းလည်း ပြောသည်။
]]> ဇင်းမယ် သင်္ကြန်မှာ ပြန်မြင်ချင်တဲ့ မြန်မာ့ယိမ်း နဲ့ တူးပို့သံ https://burma.irrawaddy.com/article/2018/04/12/156163.html Thu, 12 Apr 2018 03:30:26 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=156163
ဇင်းမယ်မြို့ရဲ့ ကျုံးပတ်လည်က ပိတောက်၊ ငုဝါနဲ့ ပျဉ်းမပင်တွေကတော့ အပြိုင်အဆိုင်ဖူးပွင့်ပြီး သင်္ကြန် ကို ကြိုဆိုနေကြပါပြီ။
The post ဇင်းမယ် သင်္ကြန်မှာ ပြန်မြင်ချင်တဲ့ မြန်မာ့ယိမ်း နဲ့ တူးပို့သံ appeared first on ဧရာဝတီ.
ဇင်းမယ်မြို့ရဲ့ ကျုံးပတ်လည်က ပိတောက်၊ ငုဝါနဲ့ ပျဉ်းမပင်တွေကတော့ အပြိုင်အဆိုင်ဖူးပွင့်ပြီး သင်္ကြန်ကို ကြိုဆို နေကြ ပါပြီ။
ပွင့်သက်တိုတဲ့ ပန်းပိတောက်တွေ သင်္ကြန် မနွှဲနိုင်ရင်တောင် ကျုံးပတ်လည် တလျှောက်မှာ ဝါထိန်နေတဲ့ ငုဝါပန်းတွေနဲ့ ခရမ်းရောင် ပျဉ်းမပန်းတွေကတော့ ဇင်းမယ်သင်္ကြန်ကို အလှဆင်ပေးမှာ အမှန်ပါ။
ထိုင်းတွေက သင်္ကြန်ကို ဆုန်ကရန် (Songkran) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ထိုင်းသင်္ကြန်ကတော့ မြန်မာသင်္ကြန်ထက် တရက် စောပြီး ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးအပါအဝင် နိုင်ငံတဝန်း စည်စည်ကားကား ကျင်းပသလို ထိုင်း နိုင်ငံ မှာလည်း မြို့တော် ဘန်ကောက်နဲ့ ဇင်းမယ် ခေါ် ချင်းမိုင် အပါအဝင် နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ဘန်ကောက် သင်္ကြန်က တနိုင်ငံလုံးမှာ အစည်ကားဆုံးလို့ ဘန်ကောက်သူ၊ ဘန်ကောက်သား တွေက ဂုဏ်ယူပြောဆိုမှုတွေ ရှိပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှု အငွေ့အသက်တွေနဲ့ ဇင်းမယ်သင်္ကြန်ရဲ့ အလှတရားကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မီမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဇင်းမယ်သူ၊ ဇင်းမယ်သားတွေက ဂုဏ်ယူ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ဇင်းမယ် ကျုံးဘေးမှာ သင်္ကြန် ရေကစားနေကြသူများ/ ကျော်ခ/ဧရာဝတီ
ဇင်းမယ်မြို့က မန္တလေးမြို့လိုပါပဲ။ ယဉ်ကျေးမှု အငွေ့အသက်တွေ ရှိနေတဲ့မြို့ချင်း တူသလို မန္တလေးမှာလို ဇင်းမယ် ကလည်း ကျုံးရှိပါတယ်။ ဇင်းမယ် ကျုံးက မန္တလေး ကျုံးလောက် မကြီးပေမယ့် ၂ ခုလုံးကတော့ နန်းမြို့ရိုးဟောင်း တွေ ပါ။
ဇင်းမယ် သင်္ကြန်ရဲ့ အစည်ကားဆုံး နေရာကလည်း ဒီကျုံးတဝိုက်ပါပဲ။ သင်္ကြန်ရက်ဆိုရင် ကျုံးပတ်လည် လမ်း တလျှောက်မှာ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ရေကစားသူတွေ ရှိသလို လမ်းလျှောက် ရေကစားသူတွေနဲ့ စည်ကား ပါတယ်။ ကျုံးထဲက ရေတွေကို ခပ်ယူပြီး ရေကစားသူ အချင်းချင်း ပက်ကြပါတယ်။
ဇင်းမယ် သင်္ကြန်မှာတော့ ပြင်းအားကြီးတဲ့ ရေပိုက်ကြီးတွေနဲ့ ပက်ကြတာမရှိပါဘူး။ ရောင်စုံ ပလတ်စတစ် ရေပုံး လေး တွေ၊ ရောင်စုံ ရေသေနတ်တွေနဲ့ ရေထွက်အား နည်းတဲ့ ပိုက်တွေနဲ့ ပက်ကြတာပါ။
ကားပေါ်မှာ ရေတိုင်ကီတွေတင်လာသူ တချို့ ကတော့ ရေခဲတုံးတွေ စိမ်ထားတဲ့ ရေတွေနဲ့ ပက်တာမျိုးတော့ ရှိပါ တယ်။
ဇင်းမယ်သင်္ကြန် ရေကစားသူတွေထဲမှာ မြန်မာတွေလည်း နှစ်စဉ် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အဖြစ် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသူတွေ၊ ချင်းမိုင် တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသွား တက်နေကြ သူတွေ၊ အဝေးရောက် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းက လူတွေပါ။
သူတို့အတွက်တော့ မြန်မာသင်္ကြန်မှာ မဆင်နွှဲလိုက်ရပေမယ့် ဇင်းမယ်သင်္ကြန်ဟာ အလွမ်းပြေစေတဲ့ အပြင် ဂုဏ်ယူ စရာ တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇင်းမယ် သင်္ကြန်မှာ တွေ့ရတဲ့ ပုဂံခေတ် ဝတ်စုံနဲ့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ တဦး/ ကျော်ခ/ဧရာဝတီ
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဇင်းမယ်သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ ငွေငန်းဖြူ၊ မြန်မာ့ သင်္ကြန်ယိမ်း နဲ့ တူးပို့သံတွေဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကတည်း က ဇင်းမယ်မြို့တော်ဝန်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရားဝင် ဝင်ရောက် ဆင်နွှဲခွင့် ရခဲ့လို့ပါပဲ။
ဇင်းမယ် မြို့တော်ဝန်က သင်္ကြန်အခါမှာ မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၄၈ ကျောင်းကို ပင့်ဖိတ်ပြီး ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု တွေကို ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာတွေကတော့ ဇင်းမယ် ကျုံးထောင့်က “ဝပ်ဆိုင်းမွန်း” လို့ အမည်ရတဲ့ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းကို ကိုယ်စား ပြုပြီး တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ဝတ်စုံတွေ၊ မြန်မာ့ ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုတွေ အပါအဝင် ငွေငန်းဖြူနဲ့ သင်္ကြန်ယိမ်း ကိုပါ တွဲဖက်ပြီး ပွဲထွက် ခဲ့ကြပါတယ်။
သင်္ကြန်ရက် ကျောင်းပေါင်း ၄၈ ကျောင်းက ယဉ်ကျေးမှု ဝတ်စုံမျိုးစုံနဲ့ ထွက်လာတဲ့ လှည့်လည်မှုဟာ ခမ်းနား လှပ လွန်း ပါတယ်။
မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ၊ ပုဂံခေတ်က ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုတွေ၊ ရောင်စုံ သင်္ကြန် ဝတ်စုံ တွေနဲ့ ကန်တော့ပွဲတွေကို ရွက်လာတဲ့ မြန်မာတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
အိမ်ရှင် ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာကတော့ တူးပို့ သီချင်းသံနဲ့ မြန်မာ့ သင်္ကြန်ယိမ်း အက အဖွဲ့ပါ။
ဇင်းမယ် သင်္ကြန်မှာ ပါဝင် ဆင်နွှဲနေတဲ့ မြန်မာများ/ ကျော်ခ/ဧရာဝတီ
ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံတဲ့ လူတန်းကြီးထဲမှာ နွေဦးရွှေမန်းမာလာ၊ ရှာပုံတော်မင်းသားကြီး၊ သင်္ကြန်မိုး၊ ချမ်းပါတယ်၊ မန်း တောင်ရိပ်ခို စတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ဝင်လာတဲ့ မြန်မာသင်္ကြန်ယိမ်း အကအဖွဲ့ကို ကြိတ်ကြိတ်တိုး အားပေးမှုကို ထူးထူး ခြားခြား ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ချင်းမိုင် မြို့တော်ဝန်ကလည်း မြန်မာအဖွဲ့ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဆု ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဇင်းမယ်သင်္ကြန်မှာ ဆင်နွှဲနေတဲ့ မြန်မာတွေ အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပြသနိုင်ခဲ့သလို သင်္ကြန် သီချင်းတွေနဲ့ သင်္ကြန်ယိမ်း အက ကိုလည်း ဖော်ကျူးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစပြီး ဇင်းမယ် သင်္ကြန်မှာ တူးပို့သံတွေ တိတ်သွားသလို သင်္ကြန် ယိမ်းအက အဖွဲ့ကိုလည်း မတွေ့ရတော့ ပါဘူး။
ဇင်းမယ် မြို့တော်ဝန်ကတော့ နှစ်စဉ် ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဖိတ်ကြား ထားပေမယ့် ဒီနှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာလည်း ငွေကြေးနဲ့ လူအင်အား အခက်အခဲတွေ ရှိတာကြောင့် မထွက်ဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဇင်းမယ်သင်္ကြန်မှာ ဆင်နွှဲမယ့် မြန်မာတွေအတွက်တော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အခြေအနေတွေကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ဇင်းမယ် သင်္ကြန်မှာလည်တဲ့ မြန်မာတွေအတွက် ဟာတာတာ ဖြစ်နေတဲ့အရာဟာ သင်္ကြန် သီချင်းသံ၊ သင်္ကြန်ယိမ်း နဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ် ဖြစ်ခဲ့သလို အခုလည်း အဲဒီအခြေအနေကို ပြန်ရောက်ခဲ့ရပါပြီ။
ဇင်းမယ် ကျုံးရေတွေနဲ့ ရေကစားနေကြသူများ/ ကျော်ခ/ဧရာဝတီ
ဇင်းမယ်ရောက် မြန်မာ တိုင်းရင်းသား တချို့ကတော့ ဝပ်ဆိုင်းမွန်း မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အပါအဝင် ဇင်းမယ် မြို့ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ပအို့ဝ် ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ အခြား ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ဒုလ္လဘ ရဟန်း ဝတ်သူကဝတ်၊ သီလရှင် ဝတ်သူကဝတ် နဲ့ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်သူတွေလည်း ရှိကြမှာပါ။
အများစုကတော့ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်လည်း ဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ ဆင်နွှဲကြမှာပါ။
အခုဆိုရင် ဇင်းမယ် ကျုံးပတ်လည်မှာတော့ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီး ကျင်းပဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဇင်းမယ်ကျုံး ဘေး ပတ်လည်မှာ ဝါထိန်နေတဲ့ ငုဝါတွေနဲ့ ခရမ်းရောင် ပျဉ်းမပန်းတွေလည်း အပြိုင်ပွင့်လို့ နေကြပါပြီ။
ဒီလို အပြိုင်ပွင့်နေတဲ့ ပန်းတွေရဲ့အောက်က ကျုံးရေတွေနဲ့ အတာသင်္ကြန် ဆင်နွှဲနေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တူးပို့ သီချင်းသံနဲ့ မြန်မာ့ သင်္ကြန်ယိမ်း ကို တမ်းတ နေမိတယ်ဆိုရင် …။ ။
]]> ထိုင်းက မြန်မာအလုပ်သမားများ သင်္ကြန်ကာလ ပိတ်ရက် သောင်းချီပြန်လာ https://burma.irrawaddy.com/news/2018/04/06/155691.html Fri, 06 Apr 2018 08:33:34 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=155691
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်-မြဝတီ ဂိတ်မှတဆင့် သောင်းနှင့်ချီ၍ ပြန်လာနေကြကြောင်း မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအရေး
The post ထိုင်းက မြန်မာအလုပ်သမားများ သင်္ကြန်ကာလ ပိတ်ရက် သောင်းချီပြန်လာ appeared first on ဧရာဝတီ.
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်-မြဝတီ ဂိတ်မှတဆင့် သောင်းနှင့်ချီ၍ ပြန်လာနေကြကြောင်း မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအရေး ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ (JACBA) က ပြောသည်။
ထိုင်းအစိုးရက သင်္ကြန် ကာလ ပြန်ကြမည့် မြန်မာအပါအဝင် ၎င်းတို့နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော လာအို၊ ကမ္ဘောဒီယား ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား များကို ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ တရားဝင် ဝင်ထွက်ခွင့် တံဆိပ်တုံး ထုခ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီးနောက် ပြန်လာနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
JACBA ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုး က “မနေ့ကထက် ၂ ဆခွဲ၊ ၃ ဆလောက်များတယ်။ ပြန်လာကြတာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲ။ မနေ့က ၅ ထောင်လောက် ပြန်လာကြတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ၁ သောင်းခွဲလောက်ရှိတယ်။ ဒါတောင် ဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲရှိသေးတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သင်္ကြန်ကာလ ပြန်လာကြသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ ဘန်ကောက်၊ ချင်းမိုင် အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံ တဝန်းရှိ စားသောက်ဆိုင်၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး အပါအဝင် လုပ်ငန်းအသီးသီးတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မဲဆောက် ချစ်ကြည်ရေးတံတားတွင် မြန်မာနိုင်ငံပြန်မည့် အလုပ်သမားများ (ဓာတ်ပုံ – JACBA)
ထိုင်းအစိုးရက သင်္ကြန်ကာလ ပြန်ကြမည့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများကို ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ တရားဝင် ဝင်ထွက်ခွင့် တံဆိပ်တုံး ထုခ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုရန် ယခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ချစ်ကြည်ရေး တံတားပေါ်မှတဆင့် တရားဝင် အထွက်တုံး ထု၍ ပြန်ကြသူများရှိသကဲ့သို့ မဲဆောက်မြို့နှင့် မြဝတီမြို့အကြားရှိ သောင်ရင်းမြစ်ဆိပ်များရှိ ဇီးတော၊ မိုးကုတ်၊ ထောင်းဒီး၊ သရက်ပင်၊ ကျောက်ဖျာ စသည့်ဂိတ်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ကူးတို့ဂိတ် ၎င်းခုမှ တရားမဝင်ပြန်နေသူများလည်း တံတားပေါ်မှ တရားဝင် ပြန်သည့် ဦးရေနှင့် ဆတူနီးပါး ရှိကြောင်း ဦးမိုးကြိုးက ဆိုသည်။
ကူးတို့ဂိတ်များကို အသုံးပြု၍ ပြန်ကြသူများထဲတွင် အများစုမှာ တရားဝင် စာအုပ်စာတမ်းများဖြင့် ပြန်လာကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း ထိုသို့ တရားဝင် အဝင်အထွက်တုံးများ မထုဘဲ ကူးတို့ဂိတ်များမှတဆင့် ပြန်ကြသဖြင့် ပြန်လာသည့် အခါတွင် တရားမဝင် အလုပ်သမားများ ဖြစ်သွားမည်ကို အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူများနှင့် အလုပ်သမား သံအရာရှိများက စိုးရိမ်နေကြသည်။
သင်္ကြန်ပြန်မည့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ထိုင်းအစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် ရက်အတွင်း ပြန်လာကြရန်နှင့် တရားမဝင် ဂိတ်များပြန်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် သတင်းထုတ်ပြန်၍ သတိပေးထားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး၏ မဲဆောက် အခြေစိုက် အလုပ်သမား သံအရာရှိ ဦးအောင်ခင်မြင့် က ပြောသည်။
ဦးအောင်ခင်မြင့် က “တံတားပေါ်က ဖြတ်ရမယ့်ဟာကို မဖြတ်ဘဲနဲ့ အောက်ကနေ လှေနဲ့ကူးသွားတယ်။ ပြီးရင် ပြန်ဝင်လာတယ်။ ဝင်လာပြီးတော့ ပြန်တက်တဲ့အခါ လမ်းမှာ စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အဝင်အထွက်တုံးတွေ မပါလာဘူးဆိုရင် ပေးမတက်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် တံတားပေါ်ကနေပြီးတော့ဘဲဖြတ်ဖို့ အောက်လမ်းကနေမကူးဖို့ ပြောထားပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကူးတို့ဂိတ်များကို အသုံးပြု၍ ပြန်သူများထဲ၌ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေး တံတားတွင် တန်းစီမစောင့်နိုင်၍ အလွယ်လမ်းမှ ပြန်သူများ ရှိသလို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို မရရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း JACBA ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုး က ပြောသည်။
ဦးမိုးကြိုး က “မဲဆောက်အထိ ပြန်လာနိုင်တယ်ဆိုကတည်းက အထောက်အားအပြည့်အစုံရှိလို့ ပြန်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ အထောက် အထားရှိရဲ့သားနဲ့မှ အောက်ဂိတ်တွေက ပြန်သွားတယ်ဆိုတာ အလွယ်လုပ်လွန်းတယ်။ ပြန်လာတဲ့အခါ တရားမဝင် အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်နှင်ဒဏ် ၅ နှစ် ထိမှာ ကြောက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အိမ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည့် ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ အနေဖြင့် ပတ်စ်ပို့ စာအုပ်ကြီး သို့မဟုတ် Certificate of Identity (CI) စာအုပ်နှင့် အတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် (Work Permit)၊ သက်တမ်းရှိသော ဗီဇာတို့ကို တပါတည်း ယူဆောင်လာကြရန် အလုပ်သမား သံအရာရှိ ဦးအောင်ခင်မြင့်က သတိပေးသည်။
အဆိုပါ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ တပါတည်း ယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါက ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရနိုင်သလို ထိုင်းအစိုးရက တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသည့် ရက်အတွင်း ပြန်လာကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးဘက်မှ ပြောပြချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား စုစုပေါင်း ၂ သန်းကျော် ရှိပြီး တရားဝင် အထောက်အထားဖြင့် နေထိုင်သူများမှာ ၁.၇ သန်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ မြန်မာ အလုပ်သမားများ အရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာလုပ်သား စုစုပေါင်း ၃ သန်းကျော်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
]]> သင်္ကြန်ပြန်မည့် အလုပ်သမားများ ထိုင်းက ဝင်ထွက်ခွင့်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု https://burma.irrawaddy.com/news/2018/04/04/155508.html Wed, 04 Apr 2018 10:02:59 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=155508
အတာ သင်္ကြန်ကာလ အမိနိုင်ငံသို့ ပြန်မည့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ထွက်ခွင့် ကြေးများကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း အစိုးရ က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
The post သင်္ကြန်ပြန်မည့် အလုပ်သမားများ ထိုင်းက ဝင်ထွက်ခွင့်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု appeared first on ဧရာဝတီ.
အတာ သင်္ကြန်ကာလ အမိနိုင်ငံသို့ ပြန်မည့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ တရားဝင် ဝင်ထွက်ခွင့် တံဆိပ်တုံး ရိုက်နှိပ်ကြေးများကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း အစိုးရ က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမကဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း၌ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အဖြစ် လာရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် လာအိုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား အလုပ်သမားများလည်း အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုမည့် ရက်ကတော့ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် သင်္ကြန် အိမ်ပြန်ကြမည့် အလုပ်သမားများကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ငွေကြေး တစုံတရာ ကောက်ခံခြင်းမပြုရန်နှင့် နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်များမှ ဝင်ထွက်ကြမည့် အလုပ်သမားများ အဝင်အထွက် တံဆိပ်တုံးထုရာတွင် ငွေကြေး ကောက်ခံခြင်း မပြုရန် ပြောထားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးအောင်ခင်မြင့် ကလည်း ပြောသည်။
ဦးအောင်ခင်မြင့် က “လမ်းမှာလည်း ထိုင်းဘက်အခြမ်းကလည်း ဖမ်းဆီးခြင်း မပြုဖို့ ငွေကြေးတစုံတရာ ကောက်ခံခြင်းမရှိဖို့နဲ့ အိမ်ပြန်တုံး၊ တုံးအကြီးပေါ့။ အရင်တုန်းကဆို ပုံမှန် ဘတ် ၁ ထောင်ပေးပြီး ထုရတယ်ဗျ။ အဲဒီကိစ္စကိုလည်း တုံးအကြီး ထုစရာ မလိုဘဲနဲ့ ပုံမှန် အဝင်အထွက်တုံးလေးပဲ တောမော (လဝက) ရုံးမှာ ထုပြီးသွားဖို့ သူတို့ဘက်က ညွှန်ကြားထားတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သို့သော်လည်း သင်္ကြန်ကာလ အိမ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ အနေဖြင့် ပတ်စ်ပို့ စာအုပ်ကြီး သို့မဟုတ် Certificate of Identity (CI) စာအုပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ စာရွက်စာတမ်း အပြည့် အစုံကို အပြန်လမ်းတွင် ကိုယ်နှင့် တပါတည်း ယူဆောင်လာကြရန် အလုပ်သမား သံအရာရှိက သတိပေးသည်။
အဆိုပါ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများမှာ နိုင်ငံသား အထောက်အထား ပတ်စ်ပို့ စာအုပ်ကြီး သို့မဟုတ် CI စာအုပ် နှင့် အတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် (Work Permit)၊ သက်တမ်းရှိသော ဗီဇာတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား မပြည့်စုံဘဲပြန်တာမျိုးဆိုရင် အဖမ်းအဆီး ခံရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် စာရွက် စာတမ်း အထောက်အထား အစုံယူခဲ့ဖို့ရယ်၊ သူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ ရက်အတွင်းပဲနေဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဲကာလကို ကျော်ပြီး နေလို့ရှိရင် ပြန်ဝင်လာရင် ပြဿနာရှိတယ်။ ပြန်ဝင်လို့ မရနိုင်တာတွေရှိတာပေါ့” ဟု ဦးအောင်ခင်မြင့် က ပြောသည်။
ထိုင်းအစိုးရက ဧပြီ ၅ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ခွင့်ပြုထားသော်လည်း အိမ်ပြန်ကြမည့် အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် ကိုယ်ပြန်လိုသည့် ရက်ကို မိမိတို့၏ အလုပ်ရှင်နှင့် သေချာစွာ ညှိနှိုင်းပြီးမှပြန်သင့်ကြောင်း အလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်း သဘောတူညီမှု ရထားသည့် ရက်ထက် ကျော်၍ နေရာမှ အလုပ် ပြုတ်သွားသည့် မြန်မာ အလုပ်သမားများလည်း အများအပြားရှိခဲ့၍ သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ထို့အတူ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်များမှ တဆင့် ပြန်ကြရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ တရားဝင် ဂိတ်များမှ အဝင်အထွက်တုံး ထုပြီးမှ ပြန်ကြရန်နှင့် တရားမဝင် ဂိတ်ပေါက်များနှင့် လှေဆိပ်များကို အသုံးပြု၍ မပြန်ကြရန်လည်း သတိပေး တိုက်တွန်းထားသည်။
]]> ထိုင်းအစိုးရက အလုပ်သမားများ ဗီဇာနှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းတိုးရန် ရက်ထပ်တိုးပေး https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/30/155207.html Fri, 30 Mar 2018 12:30:14 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=155207
ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံအတွင်း၌ လာရောက်၍ အလုပ်လုပ် ကိုင်နေကြသော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား များကို ဗီဇာနှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် (Work Permit) သက်တမ်းတိုးရမည့် ရက် နောက်ထပ် အချိန် ၃ လ တိုးပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း
The post ထိုင်းအစိုးရက အလုပ်သမားများ ဗီဇာနှင့် အလုပ်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းတိုးရန် ရက်ထပ်တိုးပေး appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ထိုင်းတွင် CI စာအုပ်လုပ်သည့် မြန်မာများ လမ်းဘေးတွင် အိပ်စောင့်နေကြရ https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/28/155045.html Wed, 28 Mar 2018 12:48:59 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=155045
CI စာအုပ်ထုတ်ပေးရေးနေရာတွေမှာ ပွဲစားတွေက ကြိုတင်နံပတ်တွေကို အများကြီး ကြိုယူထားတယ်လို့ သိရတယ်။ ပွဲစားနဲ့ ရောင်းစားထားတဲ့ သဘောပေါ့
The post ထိုင်းတွင် CI စာအုပ်လုပ်သည့် မြန်မာများ လမ်းဘေးတွင် အိပ်စောင့်နေကြရ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> လိပ်ကျွန်းလူသတ်အမှု ၂ လအတွင်းအပြီးသတ် အမိန့်ချမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/24/154833.html Sat, 24 Mar 2018 02:00:16 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=154833
မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦး၏ ရှေ့နေများက စာမျက်နှာ ၃၁၉ မျက်နှာ ပါရှိသော အယူခံ တင်ထားမှုအား ချေဖျက်နိုင်ရန် အတွက် ထိုင်းအစိုးရ ရှေ့နေများက လျှောက်ထားခြင်းကို
The post လိပ်ကျွန်းလူသတ်အမှု ၂ လအတွင်းအပြီးသတ် အမိန့်ချမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးတီခွန်မြတ် ဖြစ်လာ https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/22/154648.html Thu, 22 Mar 2018 06:15:09 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=154648
ယနေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မနက် လစ်လပ်နေခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနေရာအတွက် ဦးတီခွန်မြတ်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။
The post ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးတီခွန်မြတ် ဖြစ်လာ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ကလေးများကို ထိုင်းက ၁၀ နှစ်နေထိုင်ခွင့် ကတ်ထုတ်ပေးမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/16/154248.html Fri, 16 Mar 2018 05:55:10 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=154248
အကျင့်ပျက်လာဘ်စားတဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်များဟာဆိုရင် ကလေးငယ်တွေ အရွယ် ရောက်လာလို့ရှိရင် အထောက် အထား တစုံတရာ အတင်းတောင်းပါတယ်။ မပြနိုင်လို့ရှိရင် ဖမ်းဆီးတာ၊ ငွေညှစ်တာတွေရှိပါတယ်
The post မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ကလေးများကို ထိုင်းက ၁၀ နှစ်နေထိုင်ခွင့် ကတ်ထုတ်ပေးမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
ထိုင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် ဥပဒေသစ်အရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားများ၏ အသက် ၅ နှစ်ပြည့် ကလေးငယ်များကို ၁၀ နှစ်နေထိုင်ခွင့် ကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ဖြေလျှော့သည့် ဥပဒေကို ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ယခုလထဲတွင် ထုတ်ပြန်လိုက်ရာမှာ ကလေးငယ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေတရပ် ပါရှိ လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကွန်ရက် (MWRN ) ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော် က ပြောသည်။
ဦးအောင်ကျော် က “အသက် ၅ နှစ်ကနေ အထက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေအားလုံးကို ၁၀ နှစ်ခံ အသိအမှတ်ပြု ကတ်တွေ ထုတ်ပေးခြင်းအပေါ် ကျနော်တို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကြိုဆိုတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥပမာ ၈ နှစ်လောက် ကလေးကို သွားလုပ် မယ်ဆိုရင် ၁၈ နှစ်အထိ သူနေထိုင် ခွင့်ရသွားမယ်။ အဲဒီကာလအတွင်းမှာ မည်သည့် အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းကမှ ဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခြင်း လုပ်လို့မရဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအနေဖြင့် အသက် ၅ နှစ်နှင့် အထက် ရှိပြီဖြစ်သော ၎င်းတို့၏ ကလေးကို ခေါ်၍ သက် ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရှိ စည်ပင်သာယာဋ္ဌာနရုံးသို့ ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် သွားရောက် လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး စည်ပင်သာယာ နယ်နမိတ် အပြင်က ဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရုံးကြီး တွင်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ သွားရောက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကလေးမွေးစဉ်အခါက ထုတ်ပေးထားသော မွေးစာရင်းနှင့် အတူ မိဘများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ ကိုင် ဆောင်ထားသော တရားဝင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့် စာရွက်စာတမ်း မိတ္တူများပါရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခ ထိုင်းဘတ် ၆၀ (ကျပ် ၂ ထောင်ကျော်) ကုန်ကျမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေးငယ်များသည် မိဘနှင့် အတူ နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသည့် ထိုင်းဥပဒေ အရ ခံစားခွင့်ရခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ကလေးငယ်များ ယခုကဲ့သို့ ၁၀ နှစ်သက် တမ်း ရှိ နေထိုင်ခွင့် ကတ်ပြားများ ရရှိလျှင် ထိုအချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အလုပ်သမားများအပေါ် ငွေညှစ်တတ်သော အာဏာပိုင်တချို့လက်မှ လွတ်မြောက်မည့် လက္ခဏာ ဖြစ် ကြောင်း ဦးအောင်ကျော် က ထောက်ပြသည်။
“အကျင့်ပျက်လာဘ်စားတဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်များဟာဆိုရင် ကလေးငယ်တွေ အရွယ်ရောက်လာလို့ရှိရင် အထောက်အထား တစုံတရာ အတင်းတောင်းပါတယ်။ မပြနိုင်လို့ရှိရင် ဖမ်းဆီးတာ၊ ငွေညှစ်တာတွေ ရှိပါတယ်” ဟု ဦးအောင်ကျော် က ဆိုသည်။
ထိုင်းအစိုးရက ကလေးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော ဥပဒေများသည် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ကလေးငယ်များ အတွက် ကောင်းမွန်သော ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြစ်ကြောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ ကလေးငယ်များကို ၁၀ နှစ် နေထိုင်ခွင့် ကတ်ပြားများ လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ကြိုဆိုကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အခြေစိုက် ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း (FED) ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးထူးချစ် က ပြောသည်။
“ခုလိုမျိုး ကလေးတွေ အကုန်လုံးက ၁၀ နှစ်ခံကတ် သို့တည်းမဟုတ် တခြား တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုတဲ့ကတ် တခုခု ထုတ်ပေးတယ် ဆိုရင်တော့ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် ပညာရေး အတွက် အများကြီး အကျိုးရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ကတော့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကလေးငယ်တိုင်း ထိုင်းကျောင်းတက်ခွင့်ရှိကြောင်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း အချို့ သော ခရိုင်များ၊ ဒေသများတွင် ထိုဥပဒေသည် သက်ရောက်မှုမရှိ ကြောင်း၊ ထိုနေရာများရှိ ကျောင်းအချို့သည် ကလေးငယ် များကို မည်သည့် လက်မှတ်မှ မရှိလျှင် လက်မခံဟု ငြင်းဆိုခဲ့မှုများကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးကြောင်း ဦးထူးချစ် က ရှင်းပြသည်။
ထိုင်းအစိုးရက တရားမဝင် အလုပ်သမား ပပျောက်ရေး အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအားလုံး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် MOU နှင့် လာရောက် လုပ်ကိုင် သူများဖြစ်ရ မည်ဟုဆိုကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့က ကြီးလေး သည့် ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များ ပါဝင်သည့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
ယင်းသို့ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ သောင်းနှင့်ချီသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား များ ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ဂိတ်ပေါက်များမှတဆင့် ပြည်တော်ပြန် ကုန်ပြီးနောက် ထိုင်း အသေးစားလုပ်ငန်းတချို့ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
ထိုအခြေအနေဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူများက ထိုင်းအစိုးရကို ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေအသစ်ကို ဖြေလျှော့ပေးရန် ဝိုင်းဝန်း တောင်းဆိုခဲ့ကြသဖြင့် အစိုးရအနေဖြင့် ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များကို လျှော့ပေါ့ လိုက်ရာတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၏ ကလေးငယ်များ ၁၀ နှစ် နေထိုင် ခွင့်ကတ် ရရှိရေး လည်း ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းအစိုးရက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေတွင် တရားမဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက လုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့် အလုပ် သမားတဦးလျှင် ဘတ် ၄ သိန်း (ကျပ် သိန်း ၁၄၀) ခန့်၊ သို့မဟုတ် ဘတ် ၈ သိန်း (ကျပ် သိန်း ၃၀၀) ခန့် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး လုပ်သား အနေဖြင့်လည်း ဒဏ်ငွေအားဖြင့် ဘတ် ၂၀၀၀ မှ ဘတ် ၁ သိန်း သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ဒဏ် ၂ ရပ်လုံး ကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
ထိုဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဋ္ဌာန အနေဖြင့် ပြန်လည်ဖြေလျှော့ချက်များ အရ တရားမဝင် အလုပ်သမား တဦးမိလျှင် ယခင်က အလုပ်ရှင် အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဘတ် ၄ သိန်းမှ ၈ သိန်း ပြစ်ဒဏ်ကို ဘတ် ၁ သောင်းမှ တသိန်းထိ လျှော့ချပြီး အလုပ်သမားပြစ်ဒဏ်ကိုလည်း ယခင်က ဘတ် ၂ ထောင်မှ ၁ သိန်းထိ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလည်း ဘတ် ၂ ထောင်မှ ၁ သောင်းထိ လျှော့ချပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အလုပ်သမားအတွက် ချမှတ်ထားသော ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ကိုတော့ ပြင်ဆင်ဖြေလျှော့သည့် အထဲတွင် မပါသေးသော်လည်း ဆက်လက် ချေဖျက်ပေးရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၎င်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှ မွေးဖွားထားသော ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများမှာလည်း သိန်းနှင့်ချီ၍ ရှိနေကြောင်း ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အရေးဆောင်ရွက်နေသူများက ခန့်မှန်းပြောဆိုကြသည်။
]]> မြန်မာအိမ်အကူ ရုပ်အလောင်းကို ထိုင်းရဲ ပြန်စစ်နေ https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/09/153747.html Fri, 09 Mar 2018 09:06:09 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=153747
မြန်မာ အိမ်အကူ နော်ညိုညိုအေး၏ ရုပ်အလောင်းကို ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်ရှိ ရဲဆေးရုံတွင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီ
The post မြန်မာအိမ်အကူ ရုပ်အလောင်းကို ထိုင်းရဲ ပြန်စစ်နေ appeared first on ဧရာဝတီ.
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လပ်ဘူရီမြို့နယ်တွင် ဦးခေါင်း သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့သော မြန်မာ အိမ်အကူ နော်ညိုညိုအေး၏ ရုပ်အလောင်းကို ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်ရှိ ရဲဆေးရုံတွင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ဥပဒေအကြံပေး ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့်က ပြောသည်။
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် နော်ညိုညိုအေး သေဆုံးမှုသည် မူလက ကောက်ချက်ချထားသည့် အတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်း ကြံစည်မှု မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုကာ မိသားစုဝင်များ၊ အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် မြန်မာသံရုံးတို့က ထိုင်းအထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဌာန(DSI) ထံတင်ပြရာမှ ပြန်လည်စစ်ဆေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးအောင်မျိုးသန့် က “အဲ့ဒါ (နော်ညိုညိုအေး ရုပ်အလောင်း) ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနေပါပြီ။ အခု ရဲဆေးရုံမှာရှိတဲ့ အလောင်းကို စစ်ဆေးတဲ့ အဆင့်ကို ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ အဲဒီကနေ ရလာဒ်ထွက် လာရင် ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်မှာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နော်ညိုညိုအေး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန် မြန်မာသံရုံးဘက်မှ သံသယရှိသည့် အချက်ပေါင်း ၂၀ ကို တင်ပြရာမှ ၁၄ ချက်ကို လက်ခံစစ်ဆေးရန် ထိုင်းအထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဌာန(DSI) ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့သော နော်ညိုညိုအေး အုတ်ဂူ / AAC
နော်ညိုညိုအေး ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည် စစ်ဆေးရန် DSI က ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က လက်ခံခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးရန် တင်ပြထားသော သံသယရှိသည့် အချက်များကိုမူ အမှု စစ်ဆေးနေဆဲ ကာလဖြစ်၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရှိသေးကြောင်း ဦးအောင်မျိုးသန့် က ပြောသည်။
“ဒီအမှုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့ အမှုလား။ သူများ သတ်တဲ့ အမှုလားဆိုတာကို ပြောပြနိုင်ဖို့ အချက်ကတော့ ဆေးစာကို အရင်ဆုံး ယူရပါမယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရပါမယ်။ ဒီကလေးမရဲ့ စိတ်အခြေအနေ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှု ရှိမရှိ၊ ဒါမျိုးတွေကအစ သူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းတွေကို ပြန်ပြီးတော့ လိုက်ရတော့မှာပါ” ဟု ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့် က ပြောသည်။
ကရင် တိုင်းရင်းသူ နော်ညိုညိုအေး သည် လပ်ဘူရီမြို့နယ် ဘန်ပုံနယ်မြေရှိ ထိုင်းလူမျိုးတဦး၏ နေအိမ်တွင် အိမ်အကူ အလုပ် လုပ်နေရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့က ၎င်း၏ သူဌေးအိမ်၌ နားရင်းတွင် ကျည်ဆံ ဖောက်ဝင်ထားသည့် ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းမီဒီယာများကို ထုတ်ပြောထားသည်။
နော်ညိုညိုအေး သေဆုံးမှုအား နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချခဲ့ပြီး ဂူသွင်း သင်္ဂြိုဟ် ခဲ့ရာမှ မိသားစုဝင်များ၏ တိုင်တန်းချက်ကြောင့် ပြန်ဖော်၍ စစ်ဆေးခဲ့ရသည့် အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နော်ညိုညိုအေးသည် ပုလောအလောက်မြို့နယ် ဇာတိဖြစ်ပြီး ထိုင်းအလုပ်ရှင်အိမ်တွင် အစ်မဖြစ်သူနှင့်အတူ အိမ်အကူ အလုပ် ကို လုပ်ကိုင်နေသည်မှာ ၃ နှစ် ဝန်းကျင်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသေဆုံးချိန်တွင် အစ်မ ဖြစ်သူသည် တခြားနေရာသို့ ရောက် ရှိ နေကြောင်း၊ အိမ်ပိုင်ရှင်က နော်ညိုညိုအေးနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာ မိန်းကလေး တဦးထံ ဆက်သွယ်၍ အဆုံး စီရင် ၍ သေသွားကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နော်ညိုညိုအေး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိုင်း သတင်းမီဒီယာများကလည်း တစိုက်မတ်မတ် မေးခွန်းထုတ်လျက်ရှိပြီး ရုပ် အလောင်း စတွေ့စဉ်ကတည်းက အဓမ္မပြုကျင့်ထားမှု ရှိမရှိအပါအဝင် အမှုအား စနစ်တကျ စစ်ဆေးမှု မရှိဟု ဆိုကာ ထိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသည်။
ဆက်စပ် ဖတ်ရှုရန် – ထိုင်းတွင် ဂူသွင်း သင်္ဂြိုဟ်ထားသော မြန်မာအမျိုးသမီး ရုပ်အလောင်းကို ပြန်ဖော်၍ စစ်ဆေးမည်
]]> တိရစ္ဆာန်များအား ရိုက်နှက်ခိုင်းစေခြင်းကို မကြိုက်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထုတ်ပြော https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/08/153579.html Thu, 08 Mar 2018 02:30:48 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=153579
တောင်သူလယ်သမားများ အနေဖြင့် တောင်ယာများ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရာ၌ တိရစ္ဆာန်များကို ခိုင်းစေရာတွင် ရိုက်နှက် ပြုမူခြင်းအပေါ် မိမိ အနေဖြင့် မကြိုက်ကြောင်း
The post တိရစ္ဆာန်များအား ရိုက်နှက်ခိုင်းစေခြင်းကို မကြိုက်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထုတ်ပြော appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> တပ်မတော်နှင့် KNU ကြား စစ်ရေး သတိရှိရန် တပ်လှန့်ထား https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/06/153477.html Tue, 06 Mar 2018 13:19:37 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=153477
နယ်ကျွံ ဝင်ရောက်လာသည်ဟု ဆိုကာ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများနှင့် ဒေသခံ ကရင် ကျေးရွာသား များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရပ်ရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ (Home guard) များကြား မတ်လ ၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်
The post တပ်မတော်နှင့် KNU ကြား စစ်ရေး သတိရှိရန် တပ်လှန့်ထား appeared first on ဧရာဝတီ.
တပ်မတော်နှင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန် ခရိုင်ရှိ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ၏ တပ်မဟာ (၅) ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း တပ်မတော်နှင့် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) တို့ ကြား စစ်ရေး သတိရှိရန် တပ်လှန့်ထားကြောင်း တပ်မဟာ (၅) ဌာနချုပ်ရုံး ထံမှ သိရသည်။
ဖာပွန်ခရိုင် လူသောမြို့နယ်အတွင်းသို့ နယ်ကျွံ ဝင်ရောက်လာသည်ဟု ဆိုကာ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများနှင့် ဒေသခံ ကရင် ကျေးရွာသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရပ်ရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ (Home guard) များကြား မတ်လ ၅ ရက် နေ့ ညနေပိုင်းက ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ယင်းသို့ ဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း KNU တပ်မဟာ (၅) ရုံးထိုင်မှူး စောအဲကလယ် က ပြောသည်။
စောအဲကလယ် က “တင်းမာနေတယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ လောလောဆယ် အနေအထားကတော့ အသင့်ပေါ့လေ။ သူတို့ (တပ်မတော်) ဘက်က တပ်လှန့်ထားတဲ့ သဘောမျိုးသက်ရောက်တာပေါ့။ အဲသလိုသက်ရောက်တော့ ဒီ (KNU) ဘက်ကလည်း ပြင်ဖို့ ဆင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆကြတာပေါ့” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် လူသောမြို့နယ် လယ်မူပလောအုပ်စု၊ ခလိုးခလောခီး နေရာရှိ ကားလမ်းဟောင်း တခုအား ပြန်ဖောက်ရန် လုံခြုံရေးကင်းများ ချလာရာမှ ရပ်ရွာလုံခြုံရေး အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း KNU က ပြောဆိုသည်။
တပ်မတော်နှင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရပ်ရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ (Home guard) သည် KNU က ဖွဲ့ပေးထားသော အဖွဲ့များ ဖြစ်ပြီး KNU သည် အစိုးရနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်က တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု KNU နှင့် နီးစပ်သည့် သတင်း ရင်းမြစ်များက ဆိုသည်။
“ရွာသားတွေက ကျနော်တို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှု မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့လုံခြုံရေး အတွက်ဆိုပြီးတော့ ယမ်းထောင်းတဲ့ သေနတ် လို ဟာမျိုးတွေနဲ့ သူတို့ဟာသူတို့ တရွာစီ၊ တရွာစီ စုပြီး Home guard လို့ ခေါ်တဲ့ နာမည်မျိုးနဲ့ လှုပ်ရှားတာရှိတယ်။ Home guard က လမ်းဘေးမှာ အမြဲတမ်း သွားသွား လာလာပဲ၊ အဲဒါကို တပ်မတော်က သူ့လုံခြုံရေး ထိခိုက်မယ် ဆိုပြီးတော့ ပစ်တာနဲ့တူတယ်” ဟု စောအဲကလယ် က ပြောသည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် အဆိုပါလမ်းဖောက်မည့် ကိစ္စကို KNU ကလည်း ခွင့်မပြုကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တပ်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လာရာမှ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင် ခြင်းသည် စစ်ရေး အရ နယ်မြေ စိုးမိုးရေးအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU ဘက်က ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် Home guard အဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ဒေသခံ ကျေးရွာသားများမှာ ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်နေရကြောင်း KNU ဘက်က ပြောသည်။
ဖာပွန်ခရိုင်ထဲတွင် Home guard အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်း၊ တပ်မတော်နှင့် KNU တို့ကြား စစ်ရေးသတိဖြင့် တပ်လှန့်ထားခြင်း အပါအဝင် လမ်းဖောက်နေသည်ဟုဆိုသည့် သတင်းများကို အသေအချာ မသိရသေးကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းနောင် က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းနောင် က “ကျနော်လည်း အသေအချာ မသိသေးလို့ အခုမှ မေးနေတုန်းပါဗျာ။ ပစ်တယ်၊ ခတ်တယ် လို့တော့ မကြားသေးဘူးဗျ။ (စစ်ရေးတင်းမာမှု) အဲဒီလိုလည်း မရှိပါဘူးဗျာ။ လမ်းဖောက်တာလည်း လတ်တလော မရှိ ဘူးဗျ။ အဲဒါတွေကို သေချာမသိသေးလို့ အခြေချဗျူဟာကို မေးထားတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်” ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
တပ်မဟာ ၅ နယ်မြေသို့ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများ ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေမှု အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ KNU ဗဟို စစ်ဌာနချုပ်ထံ တင်ပြထားကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် နောက်မဆုတ်ဘဲ ဆက်လုပ်နေမည်ဆိုပါက KNU နှင့် တပ်မတော်တို့ ကြား ပဋိပက္ခ အခြေအနေ ပိုဆိုးလာနိုင်ကြောင်း တပ်မဟာ ၅ မှ KNU ထိပ်တန်း အရာရှိတဦးက ဆို သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ လောလောဆယ် သေသေချာချာ မသိရသေးကြောင်း တပ်မတော်နှင့် KNU တို့ကြား ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက ရပ်ဆိုင်းထားပြီး ပြေလည်မှုရရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ (JMC-U) ဒု ဥက္ကဌ (၁) လည်းဖြစ် KNU ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူ တဦးလည်းဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ် စောအိုင်းဇက်ဖိုး က ပြောဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ် စောအိုင်းဇက်ဖိုး က “အခုလောလောဆယ် ကျနော်က ရန်ကုန်မှာ ရောက်နေတယ်လေ။ အခြေအနေတွေကို နောက်ပြန် မေးထားတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ အတိအကျ မသိသေးဘူး။ ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဘက်က နည်းနည်း ရပ်ဆိုင်းထားပေးဖို့တော့ ပြောပေးရမှာပေါ့”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
NCA သဘောတူညီချက်အရ တပ်မတော်နှင့် KNU တို့ကြား လှုပ်ရှား နယ်မြေများ အတွင်း ဝင်ရောက် သွားလာမည် ဆိုပါက ကြိုတင် အကြောင်းကြားမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာမှု မရှိဘဲ ရှေ့ဆက် တိုးမည်ဆိုလျှင် အခြေအနေ ပိုမို ဆိုးရွားလာနိုင်ကြောင်း စောအဲကလယ် ကလည်း ပြောသည်။
“အခုလို နှစ်ဖက်စလုံး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဆဲ ကာလမှာ တဘက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကို တဘက်က လိုက်နာ ပေးရမယ်။ ဒါကို အသိအမှတ် မပြုဘဲနဲ့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆက်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေ အနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့က ယူဆတယ်လေ” ဟု စောအဲကလယ် က ပြောဆိုသည်။
KNU သည် အစိုးရနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၇ ဖွဲ့နှင့်အတူ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ သည်။
ထိုသို့ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် တပ်မဟာ ၅ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အတွင်း၌ တပ်မတော်နှင့် KNU တို့ကြား ထိတွေ့မှု ၃ ကြိမ်ထက် မနည်းရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါဖြစ်ရပ်များသည် တပ်မတော်ဘက်က နယ်ကျွံလာ၍ သတိပေးသည့် အခြေအနေ အဆင့် သာ ရှိကြောင်း KNU ဘက်က ပြောသည်။
]]> အပစ်ရပ်ထားသည့် မွန်ပြည်သစ်နှင့် KNU တပ်များ အကြား တိုက်ပွဲဖြစ် https://burma.irrawaddy.com/news/2018/03/05/153337.html Mon, 05 Mar 2018 08:41:11 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=153337
KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဒေသခံများကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအပေါ် MNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြိုးအကြောင်း လိုက်လံမေးမြန်းရာမှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့
The post အပစ်ရပ်ထားသည့် မွန်ပြည်သစ်နှင့် KNU တပ်များ အကြား တိုက်ပွဲဖြစ် appeared first on ဧရာဝတီ.